Torreira Wuxuu Doonayaa Inuu Ku Laabto Talyaaniga – Garsoore Sports
Torreira Wuxuu Doonayaa…
Torreira Wuxuu Doonayaa Inuu Ku Laabto Talyaaniga
Cayaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira ayaa doonaya inuu ku laabto horyaalka Seria A-dq dalka Talyaaniga xagaagan, seddex sano kadddib markii uu u dhaqaaqay London isagoo ka yimid kooxda Sampdoria ee dalkaasi, wakiilka xiddigan ayaa sheegay ujeedkiisa.
Torreira, oo xilli ciyaareedkii hore amaah kula joogay Atletico Madrid, isla markaana horey u doonayey inuu dib ugu laabto Koonfurta Ameerika, ayaa doonaya inuu markale ka ciyaaro Serie A-da waxaana la sheegayaa in Arsenal ay ka warqabto ujeedkiisa.
Bentancur ayaa u sheegay TuttoMercatoWeb: “Wuxuu doonayaa inuu ku laabto Italy. Waxay iga soo waceen Faransiiska, Ruushka iyo Isbaanishka, laakiin Lucas wuxuu doonayaa inuu aqbalo dalabyada ka imanaya Talyaaniga si uu markale u muujiyo qiimahiisa. ”
Gunners ayaa kooxdii la saxiixanaysa ka dooneysa 20 milyan oo Yuuro, Lazio ayaa ayaa hoggaamineysa xiisaha xiddigan laakiin weli wadahadal horumar leh lama aysan galin kooxda Arsenal.
DEG-DEG: Manchester City Oo Xaqiijineysa Saxiixa Grealish Kaddib Euro-ga
Steven Gerrard Oo U Sharraxan Shaqada Tottenham